एनआईसि एसिया र एनएमबी बैंकमा एकै समुहको लगानी, एनबी ग्रुपको कहा–कहाँ छ लगानी ?3Ghumti
एनआईसि एसिया र एनएमबी बैंकमा एकै समुहको लगानी, एनबी ग्रुपको कहा–कहाँ छ लगानी ?
बैंक/वित्त | 2020-07-30 11:44:00 |
काठमाडौं, साउन १५ । एनआईसि एसिया बैंक र एनएमबी बैंक दुबैमा विशाल ग्रुपको लगानी छ ।
एनआइसि एसियामा बिशाल ग्रुपका अध्यक्ष जगदिस प्रसाद अग्रवालको ४ लाख ९९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर लगानी रहेको छ ।
त्यस्तै विशाल ग्रुपकै प्रवन्ध निर्देशक अशोक कुमार अग्रवालको एनएमबी बैंकमा ४ लाख ८२ हजार ३ सय ५७ कित्ता संस्थापक सेयर लगानी छ ।
संघाईको त्रिबेणी ग्रुपका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघाईको एनएमबी बैंकमा ८ लाख ६२ हजार ९ सय ९५ कित्ता संस्थापक सेयर लगानी छ ।
र यही समुहका निर्देशक रामचन्द्र संघाईको २८ लाख ४० हजार १ सय २३ सस्थापक सेयर छ भने १० लाख ५८ हजार ८३ कित्ता सर्वसाधारण सेयर छ ।
त्यस्तै एनबी ग्रुपको एनसीसी बैंकमा ३ दशमलव ७५ प्रतिशत हिस्सा छ । र यही ग्रुपका प्रमुख जितबहादुर श्रेष्ठको नेपाल बंगलादेश बैंकमा दुई दशमलव ६१ प्रतिशत हिस्सा र सोहि ग्रुपका लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठको शुन्य दशलमव ६३ प्रतिशत हिस्सा छ ।
खेतान ग्रुपको अहिले हिमालयन बैंक र लक्ष्मी बैंकमा लगानी छ । खेतान ग्रुपको म्युच्युल ट्रेडिङ कम्पनीको हिमालय बैंकमा ११ दशमलव ७५ प्रतिशत संस्थापक सेयर लगानी छ ।
त्यस्तै खेतान ग्रुपकै प्रमुख राजेन्द्र खेतानको लक्ष्मी बैंकमा ४२ लाख कित्ता र उनको श्रीमती सारिका खेतानको ८१ लाख २८ हजार ७ सय ६३ कित्ता संस्थापक सेयर छ ।
सिभिल बैंक र सिटिजन्स बैंकमा प्रताप जंग पाण्डेको लगानी छ । विभिन्न बैंकहरुमा प्रवर्धकहरुले त अझ लगानी खुल्ने नाममा निकटाका नाममा सेयर राखेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा फोर्सफुल मर्जरका बारेमा खासै नबोलेको भएपनि परिपत्र मार्फत भने एकै परिवार र एकै व्यसायीक घरानाका बैंकहरुलाई मर्जरमा लाने बताएको छ ।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले अहिले बैंक तथा वित्त सस्थामा लगानी बढाएका छन् । किनभने बैंकमा लगानी गर्दा पं्रत्यक्ष मुनाफा त छँदैछ बचतकर्ताहरुले बैंकमा राखेको रकम समेत आफुले चाहेको ब्याजदरमा प्रयोग गर्न पाइन्छ ।
यसरी बचतकर्ताको रकममा हालीमुहाली बढेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मर्जरमा लाने उपाय अपनाएको हो । मर्जर गर्दा बैंक पनि ठूलो हुने र त्यसका कारण ठूलो लगान्ी समेत गर्न सकिने भएकाले बिग मर्जरतर्फ राष्ट्र बैंक आकर्षण भएको देखिन्छ ।